Sanganisa Chat neSiti yako muMaminitsi mashanu | Martech Zone
Sanganisa Kutaurirana neSaiti yako muMaminitsi mashanu
China, Gunyana 1, 2011 China, Gumiguru 27, 2011 Douglas Karr
Kupfuura WPEngine, Ndakaona kuti ivo vaimhanya chaizvo yakanaka online chat chirongwa chakabuda mushure memaminitsi makumi mashanu neshanu pane saiti. Vazhinji uye vazhinji vevatengi vedu vanga vachikumbira mhinduro yakadai, saka ini ndakaita yekuchera uye ndakashamisika nezvandakawana!
SnapEngage chirongwa chinosekesa cheChat chewebsite yako chinotora maminetsi mashanu kuisa:
Kutanga, iwe unozadza yavo widget uye embed iyo script mune yako saiti.
Tevere, iwe unobatana neiyo chaiyo 'vashanyi' iri Gtalk kana Skype.
Ndizvozvo… wapedza! Zvakakomba!
Ipuratifomu ine toni yekuwedzera magadzirirwo aripo saka takaita zvimwe zvinhu zvishoma:
Isu takagadzirisa bhatani uye tiri kuvandudza iyo template (inoda $ 49 / mo bhizinesi account kana yakakura).
Isu takawedzera "Chat Nesu" chinongedzo pane yedu Facebook Peji (Beta chimiro).
Tiri kusundira iyo yakanyorwa faira kuinbox.
Isu takawedzera Basecamp kusangana (pasina mutengo) kuitira kuti hurukuro yega yega itange tambo muchirongwa chitsva chatakadaidza kuti 'Vanotungamira'. Ivo vanobatana neanoverengeka maCRMs (kusanganisira SalesForce) uye madhesiki ekubatsira.
Isu takawedzera vamwe vashandi (iyo bhizinesi account inobvumidza kusvika kuna 4) uye takagadzirisa mapikicha avo.
Iwe unogona kugadzirisa bhatani kuti utange chat chero kupi pane yako saiti, isu takasarudza kurudyi.
Dzvanya bhatani uye chat inovhura. Kana pasina aripo kuti apindure mubvunzo, zvinongotumira email kwauri. Kana iwe uri online, inobuda mu Skype kana GTalk zvichiteerana!
Tarisa uone ese maficha e SnapEngage pane yavo peji rezvinhu - zvese zvine simba uye zvinodhura! Ino inonakidza timesaver kune vanhu vanoshanyira yako saiti uye inopa mukana wakanaka wekutora lead iyo inogona kusazowana zvavanoda uye kusiya yako saiti zvachose.
Ah… uye hongu, icho chinongedzo chekubatana!
Indasitiri Webhusaiti Bounce Rates uye Mazano
PunchTab: Mibairo Yemagariro uye Kuvimbika kune Chero Saiti